နေအိမ် > မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ > ထိပ်တန်း5ဥရောပမှာတော့အများစုကရိုမန်းတစ်ရထားခရီး
အားဖြင့် Niamh Waters 13/02/2018
သငျသညျအနှစ်အိမ်ထောင်သက်ပါပြီပဲဖြစ်ဖြစ်, တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြားဆက်ဆံရေး၏အစောပိုင်းအဆင့်နေဆဲ, တိုင်းစုံတွဲအတူတူသုံးစွဲအရည်အသွေးကိုအချိန်ထဲကနေအကြိုးပွုနိုငျ. Valentine Day ကိုတစ်ခုအားထုတ်မှုစေရန်အထူးသဖြင့်ကောင်းတဲ့ဒါဟာင်. မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြ တစ်ဦးရင်ခုန်စရာစတင်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့် ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ပြေးဖို့ သင်ချစ်တဦးတည်းနှင့်အတူ. ကျေးလက်ကတဆင့်ဒါမှမဟုတ်တောင်များကျော်တိတ်တဆိတ်မြန်ဆန်. အတိတ်ချစ်စရာကောင်းသွားလာလမ်းကြောင်း, ရှေးဟောင်းမြို့များတစ်ခုသို့မဟုတ် glacial ၏ကမ်းခြေတလျှောက် အင်းအိုင်. ဤတွင်များမှာ ထိပ်တန်း5ဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံးရင်ခုန်စရာရထားခရီး. တစ်ခုချင်းစီကို Valentine Day ကိုအထူးတစ်ခုခုကမ်းလှမ်း.
ဤ ရထားခရီး သင်နှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့အားဖြင့်သင်တို့၏ခစျြတျောတစျဦးဆောင်ခဲ့ဦးမည် ကျေးလက်. ထိုအခါသင်သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံများ၏အထင်ကြီးတောင်များအတိတ်လှိမ့်မယ်များနှင့် သြစတြီးယား. နောက်တစ်ခု, သငျသညျနောက်ဆုံးတွင်ဘာသာစကား Venetian ရန်းတူးမြောင်း၏ဘဏ်များရောက်ရှိမီရထားလမ်းအားဖြင့် Verona ၏အလှဆုံးရှုခင်းကိုခံစားမယ်.
Talking the train through France you’ll be exposed to the famous color and light of the country. ခရမ်းရောင်လာဗင်ဒါလယ်ကွင်းထဲကနေ Cote d'Azur အပြာရောင်ရေ. ရွှေနေရောင်ခြည်ဥသုံကအားလုံးကို immerses သောလမျးမှာအံ့ဩခြင်း, သင်တစ်ဦးအားရစရာဘို့အတွက်ပါပဲ. လူအပေါင်းတို့၏အများဆုံးရင်ခုန်စရာမွို့၌စတင်ခြင်း, ပဲရစ်, သင့်ရဲ့ရထားလမ်းခရီးသိသိသာသာကမ်းခြေ၏ dreamy ကမ်းရိုးတန်းလွန်သွားပါလိမ့်မယ်. သင်တို့သည်လည်းပါကျေးရွာများနှင့်နေကြာမြင်ရပါလိမ့်မယ်များနှင့် Provence ၏လာဗင်ဒါလယ်ကွင်း.
Florence ရောမမြို့မှ, အီတလီ
ဇူးရစ်၌သင်တို့၏စိတ်ကူးယဉ်ရထားခရီးကိုစတင်. Bahnhofstrasse သွားရောက်ကြည့်ရှု, အများဆုံးတဦး ဆွဲဆောင်မှုစျေးဝယ်လမ်းများ ကမ္ဘာပေါ်မှာ, နှင့် memento ဝယ်ဖို့. အဆိုပါအများကြီး-ကိုခစျြ Kunsthaus အနုပညာမှာ Van Gogh နှင့်ပန်းချီကားများ၏မှတ်သားဖွယ်အကျင့်ကိုကျင့်မှာအံ့ဩခြင်း ပြခန်း. သာယာလှပသို့ snuggling မတိုင်မီဇူးရစ်မှာစုံတွဲများလုပ်ဖို့အဘို့ဤမျှလောက်ရှိတယ် ရထားစီးနင်း Innsbruck ရှိရန်. ထူးခြားအံ့ဖွယ်ဆီသို့ဦးတည်ရေကန်ဇူးရစ်၏ဘဏ်များတစ်လျှောက်ခရီးသွား alpine ရှုခင်း. သင်တို့သည်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သောတောင်ပေါ်အရပ်၌အံ့ဘွယ်သော Vista ဖြတ်သန်းမယ်. အဘယ်အရာကိုပိုပြီးရင်ခုန်စရာဖြစ်နိုင်?
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/top-5-romantic-train-journeys-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း လန်ဒန် စိတ်ကူးယဉ်တတ်သော romanticdestinations travelflorence travelnice travelparis travelrome travelvenice
I am hard working and passionate individual with many years of experience in all things digital marketing and public relations. Over the last number of years, I have grown my skills in the area of travel as well and therefore started writing content so people can enjoy our world as much as I do. - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ, ဥရောပခရီးသွား 0
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ 0
မီးရထားခရီးသွားလာအီတလီ, မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ, ဥရောပခရီးသွား 0
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 ဒီဇင်ဘာ 2019ဇန်နဝါရီ 2020ဖေဖော်ဝါရီ 2020မတ်လ 2020ဧပြီ 2020မေလ 2020ဇွန် 2020ဇူလိုင် 2020သြဂုတ် 2020စက်တင်ဘာ 2020အောက်တိုဘာ 2020နိုဝင်ဘာ 2020